China Soft PVC Baggage Tags orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Mametaka marika amin'ny valizy foana ny olona mba hampisarahana ny azy manokana amin'ny hafa. Mba hanavahana haingana ny valizinao rehefa mandeha ianao, ny fomba tsara indrindra dia ny fampiasana ny tagan'ny Soft PVC miaraka amin'ny logo manokana na toetranao manokana.
Mametaka marika amin'ny valizy foana ny olona mba hampisarahana ny azy manokana amin'ny hafa. Mba hanavahana haingana ny valizinao rehefa manao dia ianao, ny fomba tsara indrindra dia ny fampiasana ny Soft PVC Lgage Tag miaraka amin'ny logo manokana na toetranao manokana.
Ny PVC malefaka Tags valizymanana tombony betsaka raha ampitahaina amin'ny hafa, toy ny vy, plastika mafy, marika kitapo hazo na taratasy. Ny PVC malefakaTags valizymalefaka kokoa, malefaka kokoa, maroloko kokoa ary azo soratana kokoa noho ny tagan'ny valizy vy, ny tena mahasamihafa azy dia ny tagan'ny valizy malemy paosy dia tsy ho harafesina aorian'ny fampiasana maharitra. Ireo tagan'ny PVC Malalaka dia mateza kokoa noho ireo hazo. Ireo tagan'ny PVC Malemy paosy dia tsy ho tapaka ao anaty rano raha ampitahaina amin'ny tagan'ny valizy.
Ny endri-javatra tagan'ny Soft PVC Lavalava dia azo atao amin'ny 2D na 3D, ho goba kokoa noho ny an'ny PVC sarotra izy io. Misy sary famantarana marika Embossed, Debossed, feno loko, vita pirinty na laser voasokitra ao amin'ny mari-pamantarana Soft PVC Lpack. Ny vaovao feno dia azo atao pirinty na soratana amin'ny tagy Soft PVC Luggage. Ny kofehy vita amin'ny hoditra na plastika dia manampy anao hitafy na manala ireo marika amin'ny valizy malalaka amin'ny fotoana rehetra.
Safidy fampiraisana mahazatra: fehy plastika mangarahara, fehin-kibo, fehy PU ary sns.
Teo aloha: Soft Coasters PVC
Manaraka: Misintona Zipper PVC malefaka
Tag vita amin'ny kofehy manokana
Tag ny anaran'ny valizy
Sarin'ny valizy Pvc
tag valizy pvc malefaka
Tag mitondra entana
Tagan'ny Golf Golf